Sawirro Ciidamada Itoobiya oo ka degay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sawirro Ciidamada Itoobiya oo ka degay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo +Sawirro
Waxaa garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ka degtay Diyaarad weyn oo siday cutubyo katirsan Ciidamada Itoobiya, oo qeyb ka noqonaya howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM.
Ciidamadan Itoobiyaanka ah ee gaaray magaalada Kismaayo ayaa tiradooda waxa ay gaareysa ilaa 250-askari, waxa ayna hordhac u yihiin ciidamadan ilaa Kun askari oo Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu wado in ay gaaraan Magaalada Kismaayo.
Garoonka Diyaaradaha waxaa ciidamadan uga hortagay kuna soo dhaweeyay Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Jubbaland, saraakiil katirsan Ciidamada Xooga Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee kusugan Magaalada Kismaayo.
Ciidamada Itoobiyaanka ah ee tagay Kismaayo ayaa badal u noqonaya Ciidamadii Siiralyoon ee ka baxay Magaalada Kismaayo ,kuwaa oo dalkooda ku laabtay kadib markii uu dalkooda ka dilaacay cudurka Ebola.
Masuuliyiin katirsan Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka, kuwa Kenya iyo kuwa Maamulka Jubbaland ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah kooxda Al-shabaab ee maamusha, degmooyin iyo Deegaano katirsan Gobolada Jubooyinka.
Ciidamada Itoobiyaanka ayaa fariisimo ka samaystay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, dekadda iyo waqooyiga magaalada halkaasoo markii hore saldhigyo ciidan ku lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Wadanka Siralyoon.